abcnepali | » ब्युटीपार्लरमा नै ४ हजार गर्भपतन ! ब्युटीपार्लरमा नै ४ हजार गर्भपतन ! – abcnepali
ब्युटीपार्लरमा नै ४ हजार गर्भपतन !
एजेन्सी: ब्युटीपार्लरमा सामान्यतया सौन्दर्य प्रशासन गर्ने र श्रृंगारका सामग्री बेच्ने काम गरिन्छ। ब्युटीपार्लरका सम्बन्धमा आम मानिसलाई थाहा भएको कुरा यति नै हो।
यसका साथै ब्युटीपार्लरमा प्रयोग गरिने उपकरणले मानिसको स्वास्थ्यमा गंभीर असर पार्ने विषय पनि यदाकदा संचार माध्यममा आउने गरेका छन्। तर ब्युटीपार्लरमा नै गर्भपतन गराएका समाचार भने नौला हुन्। त्यो पनि २र४ गर्भपतन मात्र होइन, सामान्य अस्पतालले भन्दा धेरै, अर्थात् ४ हजार गर्भपतन१ त्यो पनि ब्युटीपार्लरमा नै।
सौन्दर्यका सामग्री र फेसन उपकरण बिक्री गर्ने उद्देश्यले संचालन गरिएको सानो पसल ९ब्युटीपार्लर० संचालन गर्ने एक महिला पक्राउ परेपछि यो घटना सार्वजनिक भएको हो।
यो घटना भारत तमिलनाडुको हो। सो ब्युटी पसल संचालन गर्दै आएकी ३२ वर्षीय कवितालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनी विद्यालय तहको अध्ययन पूरा नगरेकी महिला भएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ। तर उनले नै गर्भपतन गराउँदै आएको उजुरी परेको छ।
उजुरीपछि प्रहरीले कविता र उनका श्रीमानलाई पक्राउ परेको तमिलनाडु प्रहरीले उल्लेख गरेको छ।
‘तमिलनाडुको तिरुभान्नमलाईमा झन्डै ४ हजार गर्भपतन उनीहरुले गरेका अनुमान गरिएको छ,’ तमिलनाडु प्रहरीले उल्लेख गरेको छ।
गैरकानुनी रुपमा गर्भपतन गराएको विषयमा जिल्लामा उजुरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिएको जानकारी दिएको छ।
सोही ब्युटीपार्लरबाट गर्भपतन गराएकी २ सन्तानकी एक आमासँग जानकारी लिन खोज्दा उनले आफूले थप सन्तान नचाहेको र गर्भपतन गराएको तर अन्य विषयमा आफूसँग थप जानकारी नभएको बताएकी छन्।